ရွှေကျွန်းတော်ရှင်နှင့် ကျောက်ဆောင်ကတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရွှေကျွန်းတော်ရှင်နှင့် ကျောက်ဆောင်ကတော်သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နှတ်မောင်နှမ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့သူမြို့သားများသည် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့အား စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယုံကြည်မှုရှိကြသည်။
ပုဂံပြည် အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် ဖောင်တော်ဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင် စုန်ဆင်းတော်မူလာ၏။ ထိုအခါ ဆင်ပေါင်ဝဲအနီးရှိ ဝဲကြီးတစ်ခုတွင် ဖောင်တော်သည် မရွေ့မလျားနိုင်ဘဲ ရှိနေသဖြင့် ကမ်းထက်မှ ဆင်များဖြင့် ဆွဲကာ ဖောင်တော်ကို ရွှေ့လျားစေသည်။ ထိုသို့ ဆင်များဖြင့် ဖောင်တော်ကို ပင်ပန်းကြီးစွာ ဆွဲသည့်အခါတွင် ဘုရင်၏ ထီးတော်မိုးတစ်ယောက်သည် ထီးတော်ကို မိုးပေးရန် အမှုလစ်ဟင်းလျက်ရှိ၏။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘုရင်မင်းမြတ်အား နေပြောက်ထိုးလေသည်။ ထိုအခါ ဘုရင်သည် ထိုထီးတော်မိုးအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုအသတ်ခံရသည့် ထီးတော်မိုးသည် မင်းကြီး၏ မိဖုရားငယ်တစ်ဦး၏ မောင်ကြီးတော်စပ်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မိဖုရားငယ်သည် မောင်ကြီးအား သတ်ဖြတ်သည်ကို ဒေါသထွက်ကာ ဖောင်တော်ဦးကို ထွက်ပြီး ဦးခေါင်းဆေးလေသည်။ ထိုအခါ မင်းကြီးသည် မပြုအပ်သည်ကို ပြုသည့်အတွက် အမျက်တော်ဖြစ်ကာ ထီးတော်မိုး၏ နှမကိုပါ ကွပ်မျက်ခဲ့ပြန်သည်။
ဤသို့ဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းအထိ လှည့်လည်တော်မူပြီးနောက် ပြန်လာရာတွင် ဆင်ပေါင်ဝဲအနီးသို့ ရောက်သောအခါ ဖောင်တော်သည် မရွေ့မလျား ဖြစ်နေပြန်သည်။ ထိုအခါ မင်းကြီးသည် ရေပြင်ကို ကြိမ်တော်ဖြင့် ရိုက်လိုက်သည့်အခါ ဖောင်တော်ဦး၌ ထီးတော်မိုး အစိမ်းနတ်မောင်နှမကို တွေ့ရလေသည်။
ထို့နောက်တွင် နတ်မောင်နှမသည် မင်းကြီးအား မိမိတို့အား အပိုင်စားနယ်ပေးသနားပါရန် ပြောသဖြင့် မင်းကြီးသည် ထီးတော်မိုးအား ဆင်ပေါင်ဝဲအနီးရှိ ကျွန်းတော်ကိုလည်းကောင်း၊ နှမဖြစ်သူအား ဆင်ပေါင်ဝဲကမ်းစပ်ရှိ ကျောက်ဆောင်ကျောက်သန့်ကိုလည်းကောင်း အပိုင်စား ပေးခဲ့သည်။
နတ်မောင်နှမသည် ဆင်ပေါင်ဝဲကို အမြဲစောင့်ရှောက်သည်ဟု မြို့သူမြို့သားတို့သည် ယုံကြည်ကြသည်။ ရပ်ရွာတွင် အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်မည်ဆိုပါက နတ်မောင်နှမသည် ကြိုတင်၍ ပြောတတ်ကြသည်။ ထို့ပြင် ဝဲကြီးများမှလည်း ထူးခြားကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် အသံကြီးများဖြင့် နိမိတ်ပြတတ်သည်။
ကျွန်းတော်ပေါ်သို့ ဆင်များ တက်ခြင်း မပြုရပေ၊ တက်လာသော ဆင်များသည်လည်း အောင်မြည်ကာ ပြေးကြရလေသည်။ ကျွန်းတော်ရှင်နတ်သည် ဖောင်တော်ကို ဆင်နှင့်ဆွဲစဉ် အမှုလစ်ဟင်းသဖြင့် အသတ်ခံရသည့်အတွက် ဆင်များကို မုန်းတီးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့၏ အမည်သည်လည်း ဖောင်ကို ဆင်ဖြင့် ဆွဲသဖြင့် “ဆင်ဖောင်ဆွဲ” ဟု ခေါ်ရာမှ ကာလရွေ့လျားလာသည့်အခါ “ဆင်ပေါင်ဝဲ” ဟု ဖြစ်လာသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ဦးထွေးဟန် (၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်). မြန်မာ့မိရိုးဖလာဓလေ့ နတ်သမိုင်း. အမှတ် - ၅၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ရွှေပုရပိုက်စာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေကျွန်းတော်ရှင်နှင့်_ကျောက်ဆောင်ကတော်&oldid=474071" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၂:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။